Qaboojinta MacBook-ga waxay ku horumarin kartaa shatigan | Waxaan ka socdaa mac
Qaboojinta MacBook waxay ku horumarin kartaa shatigan
Waa run in MacBooks-ka hadda jira uusan u kululaan doonin sida kombiyuutarradii hore sidoo kalena waa run inay qayb ahaan ku mahadsan tahay qaybo ay ka mid yihiin processor-ka cusub ee Apple Silicon. Dareenkan, shirkadda Cupertino waxay had iyo jeer dooneysaa inay horumariso sidaas darteedna waxay sii wadaa diiwaangelinta shatiyada, ee kiiskan patent-ka wuxuu ku tusayaa "nooc lugaha ah" xagga hoose sida kuwa lagu daray maalintooda PowerBook 100 laakiin si cad u soo fiicnaaday.
Waa nidaam ku dari lahaa dheeri dheeri ah qeybta hoose ee qalabka iyo qaabkan wareegga hawadu wuu sii weynaan lahaa kana sii dareeri lahaa. Shaki la'aan waxay noqon laheyd wax gaari kara MacBook in yar ama si fudud ugu sii jiri kara hal shati oo dheeraad ah liiska dheer ee kuwa la xaqiijiyay Apple.
Hawo badan, awood badan oo qalabka ah
Caqli ahaan, dhibaatooyinka kala-baxa kuleylka ayaa ah amarka maalinta ee qalabka ugu awooda badan, sidaa darteed waxay leeyihiin nidaam maamuli kara in qalabka lagu qaboojiyo hab ismaamul ah iyo wixii ka sareeya oo dhan looma baahna qalab dhinac saddexaad ah waxay macnaheedu noqon kartaa qalab aad u awood badan mustaqbalka.
Saldhigga tan patent ka diiwaangashan Apple waa "nooc ka mid ah lugta" taas oo kooxda ka mid ah wax ayaa laga soo qaadi lahaa qaybta shaashadda waana la isticmaali lahaa oo keliya haddii loo baahdo. Farsamo otomaatig ah si loo gaaro hawo-qaadasho wanaagsan si dadka isticmaala u sii wadi karaan ka shaqeynta qalabka ugu badnaan iyada oo aan loo baahnayn in la kordhiyo heerkulka.
Dabcan, faafitaanka kuleylka ayaa ah waxa inta badan hoos u dhiga horumarka laga gaaro koombuyuutarrada, waana taas sababta ay u leeyihiin lahaansho dareeraha qaboojinta xitaa iPhones., Arrin kale ayaa ah in Apple ay ku egtahay fulintooda kumbuyuutarradooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Qaboojinta MacBook waxay ku horumarin kartaa shatigan
Mactracker wuxuu leeyahay nooc cusub oo leh faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan Apple OS